‘छक्का पञ्जा’ लिएर दिपक दिपा युरोप यात्रामा - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
/ Tue, June 26, 2018
‘छक्का पञ्जा’ लिएर दिपक दिपा युरोप यात्रामा
पुस २१ गते, २०७३ - १४:४२
काठमाडौं, २१ पुस । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भारी कीर्तिमान कायम गरेको ‘छक्का पञ्जा’ चलचित्र युरोपमा प्रदर्शन हुने भएको छ । निर्माता दीपकराज गिरीले ‘छक्का पञ्जा’ युरोप यात्रामा जान लागेको जानकारी गराएका हुन् ।
नेदरल्यान्डसमा बस्ने नेपालीहरूको तर्फबाट पुस २५ गते आयोजना हुने सांस्कृतिक साँझमा जान लागेका दीपकराज र दीपाश्री निरौलाले त्यही बेला युरोपका अन्य देशमा पनि ‘छक्का पञ्जा’ प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । सो कार्यक्रममा भाग लिन दीपकराज र दीपाश्री छिट्टै नेदरल्यान्ड जाने भएका छन् ।
‘छक्का पञ्जा’ ले नेपालमा सय दिनभन्दा बढी प्रदर्शन हुँदा १६ करोड बढीको व्यापार गरेको बताइन्छ । विदेशमा पनि ‘छक्का पञ्जा’ ले हाउसफूल व्यापार गरेको थियो ।
पुस २१ गते, २०७३ - १४:४२ मा प्रकाशित
हुन्डी करोबारका ‘नाइके’ पनि पोदार नै, २५ वर्षदेखि संलग्न !
काठमाडौं । ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका विमल पोदार...
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा खर्च गरेजति बजेट असारको तीन दिनमै सकेको छ। आजको...
त्यो बेला कहाँ गएको थियो रवि लामिछानेको राष्ट्रप्रेम ?
मलाई पैसा चाहिएको थियो । मलाई जागिर चाहिएको थियो । मैले सम्पत्ति कमाउनु परेको थियो । मसँग अरु केही उपाय...
आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्दै : मेसीको जादु चल्ला की नचल्ला ?
मस्को । २१औं संस्करणको विश्वकपको शुरुवात अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीका लागि शुखत रहेन । पहिलो...
प्रधानमन्त्री ओली आज चीन जाँदै, यी विषयमा हुँदै छ सम्झौता
काठमाडौ‌ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग नेपालको विकास एवं पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग र सहकार्यको...
मेसी फेरी चुके पेनाल्टीमा, जसकारण बराबरीमा खेल टुंगियो
काठमाडौं । कमजोर मानिएको आइसल्याण्ड टिम । सबैले आजको खेललाई अर्जेन्टिनाका लागि अंकतालिकामा शीर्षता...
आलोचना शारदाको, निशानामा प्रचण्ड ! निर्माण कम्पनिको भित्रि कथा
भक्तपुर–नगरकोट जाने सडक । केही स्थानमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको देखिन्छ, कतै ग्रेभलको तयारी । त्यसो...
सेक्सका मामिलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति...
फिफा विश्वकप फुटबलको २१ औँ संस्करणको गएराति भएको उत्कृष्ट खेल निकै रोमाञ्चक रह्यो । रुसको सोचीमा भएको...
बलात्कार आरोपी छाड्न माग गर्दै प्रदर्शन
दाङ । बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका एक युवकलाई छुटाउन माग गर्दै दाङको गढवामा स्थानीयले प्रदर्शन...
प्रियंका र निकको प्रेमबारे यसाे भनिन् पुर्व प्रेमिका डेल्टाले
वर्षा राउतकाे प्रेमी सञ्जोगसँग दीपिका प्रसाईं राेमान्स गर्दै
रणवीर र दीपिकाको बिहेको मिति तय, कहाँ गर्दैछन् बिहे ?
ऐश्वर्या गर्भवती भएपछि निर्देशकलार्इ डिप्रेसन  !
हस्तमैथुन सिन दिन तयार भैइन् यी नायिका
प्रियंकाको निकसँग ‘अफएयर’, को हुन निक ?
किन आए भारतीय ‘चार्ली च्याप्लिन’ नेपालमा ?
रणवीरकाे फिल्म संजूमाथि सलमानकाे यस्ताे टिप्पणी !
सलमानको आरोपलाई रणवीरले दिए यस्तो जवाफ
गाडीबाट प्लास्टिक फ्याक्ने भलाद्मीलाई अनुष्काको गाली
६ करोडको लागतमा चलचित्र घर निर्माण
सलमान खानको पहिलो कमाई कति थियो ?
अनमोल केसी मेस्सीको फ्यान, भन्छन्- अर्जेन्टिनाले जसरी पनि जित्नुपर्छ
अध्यक्ष निकिताको ठाडो निर्देशनमा प्रदिपको ‘रोजी’को छायांकन स्थगित
छवि ओझाको परिवारमा शिल्पा पनि